Yonke into ofuna ukuyifumana malunga nesikhephe okanye intlanzi yesaber | Ngeentlanzi
EI-oarfish yenye yezona ntlobo zixhaphakileyo ezikhoyo kuzo zonke iindawo ezishushu kunye neetropiki zehlabathi. Igama layo lenzululwazi ngu URegalecus glesne kwaye ungowosapho lwe-regalecidae. Zimiselwe emanzini olwandle phantse kuwo wonke umhlaba. Kucatshangelwa njengenye yeentlanzi ezide kakhulu kwihlabathi, ukufikelela kwiimitha ezili-17 ubude.
Intlanzi yobude obu ijongeka ngakumbi njenge-monster kuneentlanzi eziqhelekileyo, ke kufanelekile ukuba uyazi. Ngaba uyafuna ukufunda yonke into malunga nale ntlanzi?
1 Iimpawu ze-oarfish
2 Ukuziphatha kweRegalecus glesne
6 Iimpawu zentlanzi yesaber
Nangona iyintlanzi emalunga neemitha ezili-17 ubude, Asiyoyona ntlanzi inkulu ehlabathini. Inomphetho omkhulu wasemva oyinika ubume obunqabileyo nobufana nenyoka.
Ayisosilwanyana siyingozi, kuba sinesimo esizolileyo. Ngenxa yokuba ihlala ihlala ezinzulwini, akukho nto ingako iyaziwayo malunga nale ntlanzi. Bayakwazi ukuhamba ngaphezulu xa besondele ekufeni okanye begula kakhulu.
Umzimba wayo ubhityile kwaye uthe tyaba, yiyo loo nto ikwabizwa ngokuba yintlanzi esaber. Ayinazo izikali, kodwa ineemvulophu eyenziwe ngeguanine yombala wesilivere. Nangona umlomo wakhe uvelile, akawabonisi amazinyo akhe.
Isiphelo sayo somqolo sikhulu kakhulu. Isuka encotsheni yamehlo iye esiphelweni somsila. Ijika ibomvu okanye ipinki kwaye ithatha umzimba uphela. Isiphelo somqolo sinalo malunga amakhulu amane ameva, Ilishumi elinambini kuzo zide, oko kuyinika imbonakalo ebonakala kakhulu.
Iimpiko ze-pelvic zinento efanayo ne-dorsal fin, kwaye ukumila kwayo kufana ne-oar (kungoko igama layo eliqhelekileyo). Kwelinye icala, amaphiko eepectoral mancinci kakhulu, kunzima ukuwabona kwaye amaphiko azo kunye neempundu zincinci kakhulu.
Ukuziphatha kweRegalecus glesne
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, I-oarfish yintlanzi ezolileyo kakhulu. Unokuthi yintlanzi eneentloni eneentloni ukutsala umdla. Xa ixatyelwe ngamarhamncwa ayo, iye ibalekele ezinzulwini ize isabele emaweni. Ichitha ixesha elininzi lobomi bayo emanzini anzulu, ibhukuda kwaye izikhusele kumarhamncwa.
Ukudada isebenzisa i-dorsal fin yayo kwaye iyenza ngokuthe nkqo. Banokufumaneka kubunzulu bokubhukuda ngokuthe nkqo. Inokudada ngokuthe tye, kuba inenkqubo yokuphumelela kakhulu yokuvumela ukuba isebenzise iindlela ezahlukeneyo zokutshintsha indlela kunye nolwalathiso. Iyayenza le nto ngenxa yomhombiso wayo wasemva.
Ngokuqhelekileyo iintlanzi zodwa kwaye azifane zibonwe kufutshane nolunye uhlobo lweentlobo ezifanayo. Ingabonakala neqela elincinci xa zifudukela kwenye indawo yokuhlala, nangona zingahlali kunye, kodwa zigcina umgama olinganayo.
Uninzi lwexesha inokufunyanwa idada kufutshane neebhanki kuba atshayelwa yimisinga yolwandle xa sele begula okanye badala kwaye bengakwazi ukumelana nemisinga. Zithathwa njengezilo ezikhulu zolwandle ngobungakanani bazo ngokunjalo iintlanzi zamatye.
Intlanzi yesaber ihlala khona ubunzulu bumalunga ne-1000 leemitha. Ngombulelo kumandla ayo okulungelelanisa iqondo lobushushu lomzimba ukuya kuma-degrees angama-XNUMX ngokukaCelsius, inokufumaneka phantse kuwo onke amalwandle ehlabathi, ngaphandle kweendawo ezibandayo. Ngokuqhelekileyo iyintlanzi efudukayo, ngoko ayihlali ixesha elide kwindawo enye. Nangona kunjalo, inokufumaneka ngokulula kwimimandla yeetropiki yolwandle olushushu.
Bahamba umgama omde ukusuka emanzini ahlukeneyo ukuya kufuna ukutya kunye nendawo yokuhlala kwaye babaleke kwiintshaba zabo. Iyakwazi ukuhamba ukusuka kubunzulu be-20 ukuya kwi-1000 yeemitha ngendlela ekhawulezayo.
Ukutya kwabo kukutya ngokupheleleyo. Bafaka ukutya kwabo iskwidi, intlanzi encinci, ii-crustaceans kunye neplankton. Yenza ukubamba kwayo ngomzamo omkhulu, kuba kufuneka isebenzise iigill zayo.
Njengoko ingenawo amazinyo, ayikwazi ukuluma ixhoba layo ukuze itye. Kodwa ekubeni indaleko ikrelekrele kakhulu, ezi ntlobo ziye zaqhelana nayo. Ukungabikho kwamazinyo kuyenzela i-gill rakers eyenzelwe ukuzingela. Zimile ngokufana neharika kwaye zisetyenziselwa ukutsala ixhoba lazo kakuhle ngakumbi.
Ngokuqubha ngokuthe nkqo, ufumana inzuzo ngaphezulu kwezinye iintlanzi, ezinje intlanzi ephaphazelayo. Ezi ntlanzi zidada ngokuthe tye kwaye zihlala kufutshane nomphezulu wamanzi.
Nangona kuncinci okwaziwayo malunga nale ntlanzi, kuyaziwa ukuba ixesha lokuzala livela phakathi kukaJulayi noDisemba. Ngeli xesha kuxa beka isixa esikhulu samaqanda. Ubungakanani bezi zinto Uluhlu ukusuka kwiimilimitha ezi-2,5 kwaye ziphoswa kumphezulu apho zihlala zidada khona kude kube ziqandusela.
I-oarfish ichunyiswa ngaphandle, kuba amaqanda adityaniswa ngaphandle komzimba wabasetyhini. Indoda ihlala kufutshane nebhinqa ukuyikhusela kuyo nayiphi na ingozi. Xa imazi ikhupha amaqanda, inkunzi iye yehla amadlozi ayo ize iwachumise.
Xa amaqanda eqanduselwa, izibungu zihlala imozulu elungileyo kwiindawo ezikufutshane nomphezulu womhlaba ade akhukuliswe yimisinga ezantsi. Nje ukuba babe emazantsi olwandle, bahlala apho de babe badala.
Iimpawu zentlanzi yesaber
I-oarfish inempawu eyenza ukuba ikhetheke kwaye yahluke kwezinye iintlanzi kwaye ayibude bayo. Imalunga ne ukukwazi ukujolisa kwilungu. Kukholelwa ukuba ikwenza oku ngokuluma umsila wayo ukuzikhulula kwirhamncwa layo. Nangona kunjalo, oku akunakwenziwa ngenxa yokungabikho kwamazinyo.
Into eyenzekayo kukuba iyakwazi ukuzikhulula kwinxalenye yayo yokugqibela yomzimba wayo ukuze ibaleke kumarhamncwa ayo kwaye emva koko inokuziphinda. Oku kunokwenziwa amaxesha amaninzi ebomini bakho.
Njengoko ubona, i-oarfish yintlanzi eseleyo kwaye kufanelekile ukuba uyazi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi yesikhitshane